Vintage Nhau: Kupona Vhidhiyo Mutambo Kunounza Kunakidza Kuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Vintage nyaya ndiwo mumwe mutambo wevhidhiyo zita iro rakawedzerwa kune iyo catalog yeapona-themed mitambo yemavhidhiyo inowanikwa yeGNU / Linux. Uyu mutambo wevhidhiyo haubatanidze chaiwo uye epamberi magiraidhi semimwe mitambo yemavhidhiyo, senge Valheim, yatakakurukurawo muLxA. Mune ino kesi, graphic yakafanana neinozivikanwa Minecraft inoshandiswa.
Uye zvakare, Vintage Nhau inonakidza kwazvo kubva pakuona kwemamakanika emutambo. Zvakanaka, kune zvese izvo, ikozvino isu tinofanirwa kuwedzera kuti akagamuchira mutsva mutsva iyo inounza kugadzikana kwakawanda kupfuura vhezheni yapfuura, pamwe nekuwedzera zvimwe zvinonakidza zvinhu zvitsva.
A dhatabhesi yepamutemo de MODs, kuitira kuti vatambi vakwanise kurodha pasi kana kurodha zvisikwa zvavo kuti vawedzere kugadziridzwa kwezita iri. Nekufamba kwenguva, zvinoenderana nevagadziri vayo, inozobatanawo nemutengi wevhidhiyo mutambo kukanganiswa mutsetse pakati pezvakavakirwa-mukati uye zvakagadziriswa zvemukati.
Kunze kwekuvandudzwa uku, iyo yekuvandudza zvakare iine zvimwe zvigadziriso uye zvigadziriso kuti mutambo ushande zvirinani. Ehezve, Vintage Nhau's Linux rutsigiro ichiri isina chaipo, asi ikozvino zvichanyanya kunyanya kuziva kuti rutsigiro rwayo rwagadziridzwa. Wayland giraidhi server iri kubata mune dzazvino distros.
Vagadziri Venyaya Vagadziri zvakare vazivisa kuti vari kushanda zvakanyanya ku inotevera yekuvandudza. Panguva iyoyo, zvigadziriso zvinotarisirwa kutarisa mukuvandudza mashandiro munzvimbo dzinoverengeka dzemusoro uyu, pamwe nemumhanzi mutsva, mhomho nyowani, nezvimwe ...
Kwechinguva, iwe unogona nakidzwa nekukodha pasi kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti, kana iwe unogona kuiwana zvakare muHumble Store kana uchida. Uye nenzira, imwe yenhengo dzemunharaunda yakagashirawo server yeLinux mafeni eiyi vhidhiyo mutambo kuti uwane ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Yenyaya Nyaya: Kupona Vhidhiyo Game Inounza Inonakidza Kuvandudza
Ubuntu ine ramangwana rakasviba. Izvi ndizvo zvatinoziva nezve Hirsute Hippo